Kunesifundo esimqoka esibonakala nge-lockdown - Ilanga News
Home Izindaba Kunesifundo esimqoka esibonakala nge-lockdown
Kunesifundo esimqoka esibonakala nge-lockdown
Ubuhle beTheku busobala ngenxa yokungabi khona kwemfucuza esakazekile
IZINDAWO eziningi eThekwini sezishaya umoya kanjena njengoba umgomo kahulumeni uthi akuhlalwe emakhaya ngenxa ye-coronavirus. Lapha ngezinye zezindawo ezihlale ziphithizela ezishaya umoya.
GENXA yobhubhane lomkhuhlane i-coronavirus, kube nesidingo sokuba uhulumeni ukhiphe umyalelo wokuba kumiswe yonke into ezweni lonke futhi bonke abantu bahlale ekhaya kuze kuphele izinsuku eziwu-21 kusukela phakathi kwamabili ngoLwesine olwedlule.
Kusele kuphela labo abachazwe ngokuthi benza imisebenzi esemqoka njengabomkhakha wezempilo, yimibutho yokuvikela, yilabo ababhekene nokugcina zisesimeni sokusebenza izindawo eziphakela ugesi namanzi, wukuthuthwa kwemfucuza, ezokuxhumana njengemisakazo namaphephandaba.
Umlobi walolu daba ube senhlanhleni yokusebenza emkhakheni ophakathi kwaleyo okuyalelwe ukuba iqhubeke nomsebenzi.
Lokhu bekusho ukuthi njengoba iningi lezakhamizi lizivalele emakhaya ngokomyalo kahulumeni, labo abenza imisebenzi esishiwo bayakwazi ukuhamba noma kuphi ngokomsebenzi.
Lwehlile novalo lokugqekezelwa izimoto edolobheni
Ngaphandle kokukhinyabezeka komnotho wakuleli nowakwamanye amazwe, nokubhubha kwabantu ngenxa yalo mkhuhlane, nokho kunesifundo esisodwa esiye sagqama kulezi zinsuku.
Lesi sifundo wukuhlanzeka okubonakalayo cishe kuwona wonke amadolobha ezwe lakithi kulezi zinsuku eziwu-10 kuphela izakhamizi ziqalile ukugonqa ngokomyalelo kahulumeni.
Emigwaqweni eminingi yedolobha iTheku, kushaya umoya njengoba zingekho izihlwele zabantu eziyaye zibonakale nxa kuvulwe zonke izindawo zomsebenzi.
Phela abantu abaningi yibona abalahla noma yikuphi lokho abasuke sebeqedile ukukusebenzisa. Nalolu hlobo olusha lwabantu oselwaba khona olubizwa ngamaphara nalo lugudluziwe yiziphathimandla, lwabekwa endaweni ehlelelwe lokho.
Umshayeli wemoto useyakwazi ukumisa imoto yakhe ngenkululeko, angene lapho efuna ukuya khona, engenalo uvalo lokuthi kunobugebengu obuzosala benzeke emotweni yakhe.
Ukungcola okukulethela amahloni nosekusikhiphe kwasiqeda nya isithunzi kumbe ukuhlonipheka kwendawo yomphakathi, nakho kakusabonwa.
Imboni yezokuvakasha ingalikhangisa kahle nezwe
Izisebenzi ezisusa imfucuza zibonakala ziwenza ngokwethembeka umsebenzi. Nabasembonini yezokuvakasha sebengakhuluma bangabi namahloni ngezwe lethu. Nenkinga yokutheleleka ngezifo kubukeka izoncipha kulezi zimo.
Sibonile nakomabonakude esinye isiphathimandla sikamasipala welinye idolobha senza isethembiso sokuthi bona njengomkhandlu bazozama konke okusemandleni ukuba lesi simo esesichaziwe kafushane lapha siqhubeke, kungabe kusabuyelwa emuva esimeni esiyihlazo esiphuma kusona.
Empeleni leli phephandaba selabhala kwaze kwacishe kwa-phela uyinki linxusa iziphathimandla ukuba zisisukumele isimo sokuxathuka nobunuku emadolobheni amaningi.
Kulona leli phephandaba sekwake kwaphawulwa ukuthi izakhamizi zaleli zwe akukho ezingeke zikufeze ngempumelelo yinqobo nje nxa zingathola ubuholi obunombono ophusile ngaleli zwe.
Lakusho futhi nokuthi kwezinye izimo kuyadingeka ukuba into efanele ukwenziwa kumele yenziwe ngisho noma lokho kungaholela ekuthini ubuholi buphelelwe wugazi kubantu. Isigebengu siyaphucwa amalungelo enkululeko ngokuba sivalelwe ejele nxa silahlwe ngamacala obugebengu yinkantolo yomthetho.
Abantu bayakudinga ukuphoqwa ukulalela kwenye inkathi
Ulimi lwesiNgisi lusibeka kahle isithombe ngemibutho yokugcina umthetho esiyibiza ngelithi “law enforcement” okusho ukuthi impoqo iyadingeka kwezinye izikhathi ukuze umthetho ugcinwe.
Nakuso isimo somgonqo kunesijeziso kulabo abayeqayo imiyalo ebekwe wuhulumeni ngaso.
Uma sekuza emphakathini ngokwawo, ingabe kukhona yini okufundile ngalesi simo esichazwe lapha?
Ingabe kusukela manje sesingalindela yini ukuthi abantu nxa sebeqedile ukudla noma ukusebenzisa into ethile, imfucuza edaleka lapho sebezoyilahla ezindaweni ezifanele njengasemigqomeni kadoti elungiselwe lokho womasipala ezindaweni?
Njengoba kugcizelelwa ukuthi imiyalo yomgonqo ebekwe wuhulumeni ibekelwe ukusiza thina mphakathi, bekungaba kuhle sikuqonde nokuthi izinhlelo zomasipala ngenhlanzeko nazo zenzelwe ukusiza thina.
Kungasisiza ukuba nathi sifane nezinkomo eziphoselwayo, ezinga-sadingi isiswebhu ukuze zingene emseleni zibheke phambili. bonginkosi@ilanganews.co.za
Previous articleinsizwa ibibikela unina uma isifuna ukuthatha
Next articleiSibhedlela sizoqinisa amabhawodi ukuvika i-covid19